မင်္ဂလာ အလှူခရီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မင်္ဂလာ အလှူခရီး
Posted by တောင်ပေါ်သား on Feb 18, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 12 comments
၁၇ – ၂ – ၂၀၁၃ နေ့မနက်မှာ ကျနော်တို့ ရုံးက ဝန်ထမ်းတွေ ကား ၂ စီးနဲ့ တွံတေးမြို့နယ် ဘုရားကြီးကျေးရွာ မင်္ဂလာ ပရဟိတကျောင်းကို အလှူခရီး ထွက်ခဲ့ကြပါတယ် ၊ ရုံးရှိတဲ့ လှိူင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ မြန်မာအင်ဖိုတက်ကနေ တစ်နာရီခွဲလောက် မောင်းရပါတယ် ၊ ကျောင်းဝင်းကြီးက အတော်ကျယ်သလို ပထမတစ်ခါကထက် ကျောင်းဆောင်တွေပိုများလာပါပြီ ၊ ဆရာတော်ဆီ အရင်ဦးတိုက်ပြီးမှ ကလေးတွေဆီသွား စကားပြောက စပ်စုကြတာပေါ့လေ ၊
၁၀ နာရီခွဲမှာ ကလေးတွေ ထမင်းစားကြပါတယ် ၊ ကျနော်တို့ ထမင်းစားပြီးတော့ ဆရာတော်ဆီမှာ လှူဘွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ ဆက်ကပ်ကြပြီး ပြန်ခဲ့ကြပါတယ် ၊
ဒီကျောင်းမှာ လက်ရှိကျောင်းသား တစ်ထောင်လောက်ရှိနေပြီး ကျောင်း မနေရသေးတဲ့ အရွယ်ကစလို့ ဘွဲ့ရပြီးသူအထိရှိပါတယ် ၊ သူတို့အတွက် တစ်ရက် ( ၂ နပ် ) ကို ဆန် ၇ အိတ်ကုန်ပါသတဲ့ ၊ အလှူရှင်ရှိတဲ့နေ့ဆို အသား ငါး ဘဲဥချဉ်ရည်မျိုးစားရပေမယ့် အလှူရှင်မရှိတဲ့ရက်တွေမှာတော့ သီးစုံပဲကုလားဟင်းလိုမျိုးပဲ စားရပါတယ် ၊ အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ တစ်နပ်စာလှူမယ်ဆိုရင် အသား ငါးဟင်းနဲ့ ၅ သိန်း ၊ ဘဲဥချဉ်ဟင်းမျိုးနဲ့က ၂ သိန်းခွဲ ကျပါတယ် ၊
ဒီကလေးတွေဟာ မိဘမဲ့တွေနဲ့ သိပ်ကိုနွမ်းပါးလို့ လာအပ်ခဲ့သူတွေပါ ၊ အဲဒီနေ့က ကျနော်တို့ ဝန်ထမ်း Fund ငွေ ၊ ထပ်ကောက်တဲ့ အလှူငွေတွေနဲ့ ထမင်း ၁ နပ်ရယ် ဆန်အိတ် ၃၀ ရယ် အဝတ်အစား မုန့် စာအုပ် စတာတွေ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ် ၊
အလှူ ခရီးကို မျှဝေလို့ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်…
ဆက်လက်၍ ပိုမိုလှူဒါန်း နိုင်ကြပါစေနော်…
မင်္ဂလာအလှူခရီးဆိုလို… မင်္ဂလာဦးမှာ အလှူလုပ်တာလားလို..ဟိဟိ ဟုတ်လဲဟုတ်ဘူး..
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ….
သာဓု သာဓု သာဓု ပါရှင်….
အဖေါ်မွန်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ လိုချင်မိပေမယ့်
ခဲမှန်ဖူးတဲ့ ဟင်္သာငယ် ဘဝမှာ
နောက်ထပ် မင်ဂါဆောင်တစ်ခု တိုးလာတာလားလို့
သာဓု သာဓု သာဓုပါဗျားး
etrade က အလှူပုံဆိုပြီး တင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ တူနေတယ်။
ဟင်္သာဖိုကြီး.. ခဲလွတ်ရာမှာ.. လှုပ်ရှားချိန်သတိသာထားပေတော့…
ဝမ်းသာအားရ သာဓု သုံးခါ ခေါ်သွားပါတယ်ဗျာ
နောက်နောင်လဲ ဒီထက် ပို လှူနိုင်ပါစေ လို့